အနောက်ဖက်..ကျားများဆီသုို့ ခရီးသွားဧည့်သည် (အပုိုင်းနှစ်) ~ Shannilay
အနောက်ဖက်..ကျားများဆီသုို့ ခရီးသွားဧည့်သည် (အပုိုင်းနှစ်)
***အနောက်ဖက်..ကျားများဆီသုို့ ခရီးသွားဧည့်သည် (အပုိုင်းနှစ်)***
- မုိုးလေးတဖွဲဖွဲကြားမှာ ကျနော်နှင့်လုံးအောက်ကြွယ် အိပ်ဆွဲပြီး ဆုိုင်ကယ်ဖြင့် အုန်းစံဆုိုင်မှ ထွက်လာရာ ဘီးလူမြို့နှင့် လောင်လုံစည်းခမ်းခေါ် အင်းတော်ကြီးသွားတဲ့ ကားဂိတ် ဇရပ်လေးမှာ ခဏစောင့်နေစဉ် လာပါပြီးဗျာ.. ဂျစ်ကားလေး အပြေးနှင်လုို့ ရွံ့တွေဗွက်တွေ ဗလပွနဲ့ ခေါ်မုိုးပေါ်မှာလည်း အိပ်တွေကလည်း တုိုးလိတွဲလောင်းနဲ့ပေါ့ ကားဆရာက… ရပ်ပေးပြီးကဲ ဆရာသမားတုို့ အိပ်တွေပေါ်တင် ဆုိုပြီးသူ့တပြည့်ကျော်ကုို ပြောလုိုက်ပြီး ကျနော်တုို့နှစ်ယောက်လည်း ကားခေါင်းမှာဝင်ထုိုင်ပြီး ကားကစတွက်ပါတော့တယ်… ကားထွက်ပြီးမကြာမှီ…ဘီးလူးမြို့အထွက်က အလယ်တန်းကျောင်းကြီးနား အရောက် ကားဆရာက..ခဏနော် ကျနော်ဒီမှာလုိုက်မဲ့ သူတွေရှိသေးလုို့ ဟုကျနော်တုို့ကုို ပြောပြီး ဖုန်းထုိုးလုိုက်ရာ .. မကြာမှီလာပါပြီဗျား ဗီယက်နမ်လုိုလို သျှမ်းခမောက်တွေဆောင်းလုို့ သျှမ်းနီမလေးများတအုပ် ပါးမှာကလည်း ပါးကွက်ကြားနဲ့ ပြောနေတာက သျှမ်းစကား.. သူတုို့ရဲ့ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်မယ်ထင်တယ် အသက်လေးဆယ်ကျော်ခန့် အမျိုးသမီးကြီးက… ကဲကဲ မြန်မြန်တက်ကြတော့ … သွားမယ်ဟု.ဆုိုပြီး ကားပေါ်တက်ကြ ဆူလုို့ညံလုို့ပေါ့ ..
သိတယ် မဟုတ်လား ကျနော့်..လက်စကလည်း ဒီအချိန်မှာပါလာတဲ့ ကင်မယာနဲ့ သျှမ်းနီမလေးတအုပ်ကုို ရုိုက်လုိုက်တာ ပုိုလုိုပွဲကြသွားပါလေရော.. လှအောင်ရုိုက်ပေးလုို့ ပြောသူပြော..
ရုိုက်ပြီးပြန်ပုို့ပေးလုို့ အော်သူအော်.. သူတုို့ကလည်း ကျနော့်ကုို ကြောက်ပုံမပေါ် ဘယ်ကြောက်မလဲလေး ကျနော် မေးလုိုက်တဲ့ စကားသံကလည်း သူတုို့ပြန်ဖြေတဲ့ စကားသံလုိုပဲ သမကွဲနကွဲကုို .. သျှမ်းနီ လအော့လအယ် အမျိုးတွေမှန်း… အသိတာကြီးကုို… မေးကြည့်မိ လုိုက်တော့ အင်းတော်ကြီး အမျိုးတွေစီမှာ ကောက်စုိုက် သွားကြမလုို့တဲ့လေ… ကျနော်တုို့လည်း ကားပေါ်တက်ထုိုင်ပြီး ဂျိမ်းဆုိုတဲ့ ကားတံခါးပိတ်သံနဲ့အတူ ကားကလည်းတလိမ့်ခြင်းနဲ့မောင်းလေပြီ…
သုံးနာရီနီးပါးလောက် မောင်းပြီးတော့ .. ဆုိုင်တန်းတွေရှေ့အရောက်မှာတော့… ကားဆရာက.. ကဲကဲဗုိုက်ဆာတဲ့သူတွေ ဒီမှာထမင်းစားကြမောင်.. စားပြီးကုိုယ့်ဟာကုိုယ်ပေးလုိုက်ကြလုို့ အော်လုိုက်မှ အခုိုင်အမှာဆောက်လုပ်ထားတဲ့ ဈေးဆုိုင်တန်းတွေမှန်း သတိထားမိ ပါတော့တယ်..
လုံးကြွယ်နဲ့ကျနော်လည်း သူ့အသိဆုိုင်ထဲဝင်ထုိုင်ပြီး လုံးကြွယ်ဒါ ဘယ်နေရာလည်းလုို့ မေးလုိုက်မှ သူက.. တောင်ခြေရောက်နေပြီလေတဲ့.. တကယ်ပင်တောင်ခြေကုို ရောက်နေတာပါ အရင်တုန်းကများဆုို ဒီနေရာကုိုရောက်ဖုို့ တော်တော်လေးကုို ..မောင်းရပါတယ်… ဒီတခါတော့လမ်းတွေက မဆုိုးပါလားလုို့ပြောလုိုက်မှ သူက ဘယ်ဆုိုးပါ့မလဲမောင်.. မင်းရှေ့တည့်တည့်က ခြံကုိုကြည့်လုိုက်ပါလားတဲ့.. ကြည့်လုိုက်ရာ ခြံဝင်းကြီးတခုထဲမှာ သွတ်မုိုးတဲတစ်လုံးနဲ့ ၀င်းထဲမှာ ကျောက်ခဲတွေပုံလုို့ ခြံတံခါးဝမှာတော့ မနော်တုိုင်တံစိတ်နဲ့ Jade land ကုမ္ဗဏီလီမိတက်တဲ့ အော် ဒီတော့မှပဲ သဘောပေါက်တော့တယ် အစုိုးရပြင်ထားပေးတယ် ထင်နေတာ…
ကျနော်တုို့နှစ်ယောက်လည်း ဆုိုင်ထဲကထွက် ကားပေါ်တက်ပြီး ကားလေးလည်း တောင်ပတ်လမ်း အတုိုင်း မောင်းနင်လေရာ လွန်ခဲ့သော ၁၉၉၂ ကုိုပြန်မြင်ရောင်မိသည် အခုလုိုအင်းတော်ကြီးတောင် တက်ပြီဆုိုတာနဲ့ .. ကားဟွန်းသံတွေ ဆူလုို့ညံလုို ခြေလျှင်တက် သူတွေတက် မော်တော်ကားကြီး တခြမ်းစောင်းနေလုို့ တက်ဖိသူဖိ ဆွဲဆွဲ.. တွန်းတွန်.. ဟုိုးဟုိုး အော်သူအော် ဆူလုို့ညံလုို ဗွက်တန်းထဲမှာ ဒီတောင်ကြော်ဖုို့ အချို့ဆုို လမ်းမှာတောင် တညအိပ်ရသူတွေရှိသေးတယ်.. အတွေးကောင်းနေစဉ် ကားရပ်လုိုက်မှ တောင်ထိပ်ဂိတ်ရောက်နေပြီကုို မြင်တွေ့လုိုက်ရပါသည်။
သစ်သားပြားပေါ်မှာ ဆေးအဖြူနဲ့ ရေးထားတဲ့ “အင်းတော်ကြီးကန် ပတ်ဝန်းကျင် စိန်းလန်းစုိုပြည်ရေးနှင့် ရေရှည်တည်တံ့ ခုိုင်မြဲရေး လုပ်ငန်းနယ်မြေ ” ဆုိုတဲ့…. ဆုိုင်းဘုတ်နဲ့ ကုိုဖတ်လုိုက်ပြီး သိပ်မကြာလုိုက်ပါ ကားဆရာ တပြည့်ကျော်က ကားလက်မှတ်ထုိုးပြီး လာခဲ့ပြီမုို့ ကားကလည်း တောင်အောင်တုို့ စတင်ဆင်းပြီပေါ့ ၁၅ မိနှစ်ခန့်ဆင်းပြီးနောက်မှာတော့ ကားဆရာက ကုိုယ့်သျှမ်းနီ အချင်းချင်းမုို့ထင်ပါရဲ့ သွေးကပဲစကားပြောလေသလား မသိပါ ကျနော်ဘာမှမပြောရပဲ ကားရပ်ပြီး ဓါတ်ပုံရုိုက်ချင်ရုိုက် ရှုးခင်းကလည်းကောင်းတဲ့ နေရာလေးပေါ့ ဒါပြီးရင် အဆင်းပဲရှိတော့တယ်.. ဒီဆင်းရင် အင်းကုိုမမြင်ရတော့ဘူးတဲ့ ကျနော်လည်း သိတဲ့အတုိုင်း ကားခေါင်မုိုးပေါ်တက်ပြီး ကလစ်ကလေး သုံးလေးငါးခုဆွဲချလုိုက်ပါတော့တယ်…
ကျနော်တုို့ စီးလာသော ဂျစ်ကားလေးသည် တောင်ပတ်လမ်းအတုိုင်း တလိမ့်လိမ့်ဆင်းလာပြီး နမ့်မွန်းကုိုကြော်ကာ မမုံကုိုင်.. သျှမ်းခေါက်ဆွဲဆုိုင်ရှေ့မှာ ရပ်ခုိုင်းကာ ကျနော်တုို့နှစ်ယောက်ကဆင်း ကားပေါ်မှာပါလာတဲ့ သျှမ်းနီမတအုပ်ကလည်း နောက်နှစ်ပြန်တွေ့မယ် ဘာညာတာ့တာ ဘုိုင်းဘုိုင်း လုပ်သူလုပ်ပေါ့.. ဒီလုိုနဲ့သူတုို့ ကားလေးပြန်ထွက်ပြီး ကျနော်တုို့လည်း ဆုိုင်ထဲဝင် ဆုိုင်ရှင်အမျိုးသမီးက သူ့အမျိုးသားကုို လူလွတ်သွားခေါ်ခုိုင်ပြီး လာပါညပြီဗျာ… ပီအုိုက်လုံက..သိတယ်မဟုတ်လား အေးမောင်း .. မင်းတုို့ရောက်နေတာကြာပြီလား.. မောင်… ငါ့မှာ.. မင်းတုို့ ...မရောက်သေးဘူးထင်လုို့ ဟုိုခဏသွားခြေတာ.. စကားလက်ဆုံ ပြောကြဆုိုကြပြီး သူက ဆုိုင်ကယ်နှစ်စီး စီစဉ်ပေးပါတယ်.. ဆုိုင်ကယ်နှစ်စီးနှဲ့ လူနှစ် ရောက်လာတော့မှပဲ ကျနော်တုို့လည်း ပီအုိုက်လုံကုို နှုတ်ဆက်ကာ မမုံ့ကုိုင်ရွာလေးကုို ကြောခုိုင်းပြီး ရှေခရီးဆက် ရပေါတော့တယ်…
မုိုးကတဖွဲဖွဲနဲ့ ဆုိုင်ကယ်နောက်မှာ ကင်မယာလေးကုို မုိုးမထိအောင် ဖုံးကုိုင်လုိုက်ပါလာရင်း ကျနော်ရုိုက်ချင်တဲ့ ဘုရားတုို့ စေတီတုို့ တွေ့ရင် လမ်းဘေးမှာ ရပ်ပေးရှာပါတယ် … ကျနော့်ကုိုလုိုက်ပုို့သူ မမုံ့ကုိုင်ရွာသား စုိုင်းစိန်မြင့်က မုိုင်းနောင်ရွာ ..အထွက်လည်း ရောက်ရော.. ခဏလေးခဏလေး ဒီမှာကျောက်စာရှိတယ် ဆုိုပြီး ဆုိုင်ကယ်ရပ်တော့တယ်.. ဒီလုိုနဲ့ သိပ်မကြီးလှတဲ့ ဘုရားစေတီလေး တစ်ဆူကုိုတွေ့ရပါတယ်… စေတီရဲ့ အနီးကပ်လျှက်မှာ ကျောင်းအငယ်လေး တစ်ဆောင်လည်းရှိပါတယ်.. စုိုင်းစိန်မြင့်က ဦးဇင်း..ဦးဇင်း လုို့အော်ခေါ်မှ ဦးဇင်းက အေးငါဒီမှာ..လာခဲ့ ဆုိုပြီး..
စုိုင်းစိန်မြင့်က… ဦးဇင်း...ဟို..သျှမ်းနီကျောက်စာတုံး ရှိသေးလားလုို့ သူကမေးတော့.. ရှိတယ်လေ.. နေရာဟောင်းမှာပဲ …လုို့.. ပြောသံအဆုံးမှာ စုိုင်းစိန်မြင့်က လွှာကနဲ့ အုတ်တံတုိုင်းကုိုကျော်ကာ တိမ်ကျောင်းလုို့ပြောတဲ့ သိပ်မကျယ်လှတဲ့ အုတ်တံတုိုင်း လေးဒေါင့်ထဲကနေ ဒီမှာ.. ဒီမှာဆုိုပြီးမှ.. မယူတက်လာပါတော့တယ်.. ဒီကျောက်စာ..တုံးတွေက အရင်ဒီဘုရားအဟောင်း ပြိုလုိုဌာပနာထဲက ရတဲ့ဟာတွေလေ… ကျနော်တုို့ကြည့်လုိုက်တော့ ဟုိုးရင်မြင်ဖူးတဲ့ ကျောက်စာ တွေလုို သေးသေးလေး စာတန်းမျိုးမဟုတ်ပဲ စာလုံးအကြီးနဲ့ ရေးထားတာဖြစ်ပြီး တခြမ်းပဲ့တခုပါ စလုံးတွေကတော့ သိပ်မထင်မရှားတော့ပါဘူး... သူကပဲဆက်ပြီးပြောသေးတယ် အရင်စာသားတွေ အများကြီးပါတဲ့ ကျောက်ပြားကြီး. ကတော့ ကျနော့်အဖေပြောတာ ဦးသန့်.. လာတယ်သွားတယ်လုို့ပြောတယ်..
ကျနော်ကလည်း ဦးနုမဟုတ်ဘူးလား . လုို့မေးတော့. ဦးမဟုတ်ဘူး ဟုို.. ကုလသမဂ္ဂ မှာလုပ်တဲ့ဦးသန့်လုို့ ကျနော့်အဖေပြောတယ် လုိုပြန်ပြောပြပါတယ်…
ကျောက်တုံးကုို ကျနော်တုို့ ရေဆေးပွတ်ကြည့် ဒီကြည့်ဟုိုကြည့် လုပ်နေလုို့ မကြာမှီသူကပဲ ဒီမှာလာ ကြည့်ပါဦးလုို့ အော်ခေါ်လုိုက်ရာ ကျနော်တုို့လည်း လုိုက်ကြည့်လုိုက်မှ စောစောက သူလွှားကနဲ့ ၀င်သွားတဲ့ တိမ်းကျောင်းလေးထောင့် တိမ်ကျောင်း ငုတ်ဘေးမှာကပ်လျှက် အောက်ခြေမှာ စာပါတယ် မပါတယ်တော့ မသိပါ အချွန်လေးတွေ ငေါငေါနဲ့ ကျောက်ငုတ်တွေ အများကြီးကွန်ကရစ် လောင်းထားပြီး သလင်းလုပ်ထားတာ တွေ့ခဲ့ရပါတယ် … ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မုိုင်းနှောင်ဟာ သျှမ်းနီ စော်ဘွားတွေခေတ် မုိုးကောင်းခေတ်မှာလည်း အင်းကြီးရဲ့ အဓိက ချုပ်ကုိုင်တဲ့နေရာလုို့သိရပါတယ်.. အဲ့ဒီ... ကျောက်စာတွေ့ရှိတဲ့ ဘုရားစေတီရဲ့ ရှေးဟောင်း သျှမ်းနာမည်ကတော့.. “ဖလားမောက်စလွန်” လုို့ခေါ်ပြီး ယနေ့အချိန်မှာတော့ သိသူရှားပါပြီး ယခုအခါမှာတော့ “ရန်အောင်မြင်” လုို့သာ လူသိများသောနာမည်ဖြစ်ပါတော့တယ်…
ကျနော်တုို့လည်း ရှေ့ခရီးသုို့ဆက်လက် ထွက်ခါလာခဲ့ကြပါတယ်.. တုံပေကျေးရွာ.. ကုန်းမနတုို့ ရောက်လာခဲ့ပါတော့တယ် ..ကုန်းမန လုံးထွန်းဖေ အိပ်မှာပဲ လုံးထွန်းဖေနဲ့ စကားစမြီးပြောကြဆုိုကြပေါ့ မကြာမှီမှာပဲ.. လုိုက်ပုို့သူ စုိုင်းစိန်မြင့်နဲ့ မမုံကုိုင်ရွာသားကုိုကျော်ဆင်း တုို့လည်း ကျနော်တုို့ကုိုကြောခုိုင်း၍ ပြန်သွားလေပြီ… ကုန်းမနရွာလေးဟာ. ဆောက်လုပ်စ အလယ်တန်းကျောင်းလေးနဲ့ အတူ တမျှော်တခေါ် လယ်ကွင်းစိမ်းတွေနဲ့ သစ်ပေါဝါးပေါ ငှက်ပျောတောတွေနဲ့ ကြေးငှက်များပေါပြီး အေးချမ်းသာယလှပတဲ့ ရွာလေးတရွာပါ... ရုိုးသားလှတဲ့ လောင်လုံစည်းခမ်း အင်းပတ်လည် သျှမ်းနီရွာကြီး ၁၁ ရွာအုပ်စုရဲ့ ရွားလေးတစ်ရွာလည်း ဖြစ်ပါတယ်..
ညပုိုင်းရောက်လုို့ ကျနော်နဲ့အတူပါတဲ့ လုံးကြွယ် အိမ်ရှင်လုံးထွန်းဖေနဲ့သူ့ဇနီး လာလည်သူတွေနဲ့ လူငယ်ရွာဥက္ကဌ.. စုိုင်းစန် ကတော့ သူတုို့ရဲ့ မှုရင်းဌာနေ သျှမ်းနီစကား တွေနဲ့ အားရ၀မ်းသာ ဆုိုသလုိုပြောဆုိုနေကြတာကုို ပိတိဖြစ်မိပါတယ်.. အင်းတော်ကြီးဒေသဟာ သျှမ်းနီလူမျိုးတွေအတွက် ရေခံမြေခံကောင်းတဲ့ နေရလည်းဖြစ်သလုို သျှမ်းနီလူမျိုးတွေ စတင်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ မုိုးကောင်း၊ မုိုးညှင်း၊ မုိုးမိတ် တုို့ရဲ့ သမုိုင်းဦးအစ နေရာလည်းဖြစ်ပါတော့တယ်..
သူတုို့ရဲ့စားသံတွေမှာ ကျနော် သိတဲ့ဟာပါသလုို မသိတဲ့ဟာတွေကလည်း များများပေါ့ အားစုိုက်နားထောင်ရင်း ငယ်ငယ်က အိမ်မှာ ကျနော့်အဖွားအီနဲ့ အမေကုို ပြန်သတိရနေမိတယ်.. ကျနော်တုို့သံလမ်းရုိုးဘက်က မိဘဘုိုးဘွားတွေဟာ သူတုို့ချင်း ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ဆုံကြရင် ပြောလုိုက်ကြတဲ့ သျှမ်းနီစကား အိပ်ပြန်ရောက်လာရင် ဗမာလုိုပဲပြောကြပြန်ပါတယ်.. သူတို့မြေးမြစ်.. သားသမီးတွေ ဗမာလုိုမတတ်ရင် လူရာမ၀င်မှာကုိုပဲ စုိုးရိမ်နေရော့ သလား ဒါမှမဟုတ် သျှမ်းနီဆုိုတာကုိုများ သိရင်တခုခုများ ဖြစ်လေမလား တခုခုများလုပ်ကြမလား.. ဆုိုတာကုို စုိုးရိမ်လေ သလားတော့မသိပါ.. သံလမ်းရုိုး မုိုးကောင်း၊ မုိုးညှင်း၊ မြစ်ကြီးနား မြို့ကြီး များမှာနေထုိုင်တဲ့ သျှမ်းနီတွေဟာ ထမင်းစား ရေသောက် ကလွဲရင် ကျန်တာမသိတာများပါတယ်.. ရွာပုိုင်းတွေမှာတော့ အချို့ အခုထိပြောကြတုန်းပါ.. ဒါကြောင့်ကျနော်တုို့ကုို သူများတွေက ရပ်သျှမ်းလုို့ခေါ်ပါတယ်.. ကျနော်တုို့ ရပ်ပြီးပဲသျှမ်းလုိုပြောလုို့ရတယ် ထမင်းစားပြီးပြီလား ဘယ်ကလာလဲ ဘယ်သွားမလဲပေါ့ ထုိုင်းပြီးပြောရင် သျှမ်းစကားကကုန်ပြီ… ညလည်းနက်လာပြီမုို့ ဧည့်တွေလည်းပြန်လုို့ အိပ်ယာလည်းဝင်ကြပြီ တညတာနားရပေဦးမည်ပေါ့..
နံနက်လင်းလုို့ ကော်ဖီသောက် မူန့်စားပြီး ခဏအကြာမှာ ဆုိုင်ကယ်တစ်စီးရောက်လာပြီး အင်းတော်ကြီး ရွှေမဉ္စူ ရေလယ်ဘုရားသွားဖုို့ ဆုိုင်ကယ်လာပုို့တာပါတဲ့ ကျနော်နဲ့ လုံးကြွယ်... သူကမောင်း ကျနော်က အနောက်ရုိုက်ပေါ့ ဘုရားကုိုလည်းရောက်ရော သုံးလေးကလစ် ဆွဲချလုိုက်ပြီး ညာဘက်ဘေးကုို ကြည့်လုိုက်စဉ်မှာပဲ ဟုိုးအရင်က မမြင်ဘူးခဲ့တဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းဆောင်လုိုလုို ဇရပ်ကြီးလုိုလုို ခန်းညားထည်ဝါတဲ့ ဓမာရုံ အဆောက်အဦးကြီးတခု အလူရှင်အမည် ဖတ်ကြည့်လုိုက်တော့" ဒေါ်ပုလဲ" တဲ့.. ကျနော်တုို့အပြန်လမ်းဘက်ကျမှာပဲ ပွဲအချိန်ပွဲခင်းလုပ်တဲ့ မြင်ကွင်းကုိုအနီးကပ် သေသေခြာခြာမြင်ရ ပါတော့တယ် ကားလမ်းနဲ့အတူ အလျှားလုိုက် ပွဲခင်းကွင်းပြင်ကြီးရဲ့ အလယ်က ဖြတ်တူထားတဲ့ မြောင်းကြီး တခုပါ ဘာဖြစ်လုို့ပွဲခင်းအလယ်က မြောင်းကြီးတူးတာလည်းပေါ့.. သိချင်စိတ်ကများနေပါတယ်..
ဒီလုိုနဲ့... အိမ်ရောက်တော့ အိမ်ရှင်များက ဧည့်ဝတ်ကျေပြွန်စွာ ထမင်းခူးထားပေးပြီးဖြစ်တာမုို့ ထမင်းစားသောက်ပေါ့ သျှမ်းထမင်းဟင်း စားလုို့ကလည်းကောင်း မြစ်ဟင်းရည်နဲ့ ငါးချက်.. ကြက်သားကျောက်ဖရုံ ခရမ်းသီးမီးဖုတ်ထောင်း ဘာပြောကောင်းမလဲ..
ထမင်းစားပြီးလုို့ ရေနွေးကြမ်းသောက်ရင်း ရှေ့ခရှီးအတွက် ဆုိုင်ကယ်စောင့်ရင်ပေါ့ ကျနော့်စိတ်ထဲ တအုံနွေးနွေး ဖြစ်နေတဲ့ ပွဲခင်းလယ်က မြေတူးမြောင်းကြီး..မထူးတော့ပြီ.. မနေသာတဲ့အဆုံး မှာတော့ လေးဖေ.. ပွဲခင်းလယ်ကမြောင်းကြီးက ဘာလုပ်ထားသလဲဗျာ့... လုို့မေးလုိုက်တော့ .. အေး... မင်းမြင်ခဲ့တယ်. မဟုတ်လား ဘုရားလမ်းညာဘက်က ဓမာရုံကြီးဟာလည်း အတူတူပဲ .. အဲ့ဒါ က အလူရှင် ဒေါ်ပုလဲတဲ့ ဆောက်တုန်းကတော့ အင်းတော်ကြီးအင်းပတ်လည် သံဃာတွေအတွက် ပွဲအချိန်ဆွမ်းဖုံးပေးပုို့ လုိုလုိုပေါ့ ဓမာရုံလည်းပြီးခါနီး သူ့ဦးဇင်းသံဃာ လာထားမယ် လုပ်တော့တာပေါ့ အဲ့..ဒီမှာသူပေးလုို့ကြွေးလုို့ စရတဲ့လူတွေကတော့ လက်ခံသူလည်းရှိသေး ..
ဒီမှာ..ရှိတဲ့ သံဃာအချို့ကလည်း လက်မခံကြဘူး ပွဲဖြစ်တုိုင်း ဒီမှာရှိတဲ့ ဆယ့်တစ်ရွာကပဲ ဦးဆောင်နေတာ အခုသူ့ဓမာရုံ ဆောက်ပြီးရင် သူ့ သံဃာနဲ့ ဒီဘုရားကုို ဆယ့်နှစ်ရာသီ သူကြီးဆုိုးမယ်... ဒီပွဲဘုရားပွဲကြီးကုိုလည်း အပုိုင်စီးတော့မှာလေ.. အခု.. အဲ့ဒီဓမာရုံ မပြီးခင် သူ့သံဃာတောင် လာမထားရ သေးဘူး .. ဘုရားပွဲကြီး မပြီးသေးဘူးကွာ.. အဲ့မင်းမြင်ခဲ့တဲ့ ပွဲခင်းအလယ်က မြောင်းကြီးဟာ သူ့ရဲ့ ဘက်ဖုိုးကြီးတွေ ခေါ်ပြီး တူးပြစ်လုိုက်တာလေ .. အဲ့ဒီမှာ သူ့ဘက်မပါတဲ့ သံဃာတွေ ရွာသားတွေနဲ့ စကားတွေ များကြပေါ့ နောက်ဆုံးတော့ ဒီပွဲကုို ..ဘယ်ဘုန်းကြီး ဘယ်ရွာမှ မပုိုင်ဘူး ငါတုို့... ဟုိုးဘုိုးဘေးထဲက ဒီအင်းကြီး ရွာ၁၁ ရွာက သဘောတူမှ လုပ်လုို့ရတာဆုိုတာ ငါတုို့စော်ဘွာတွေ ပေါ်မိန်းတွေ ထမုံတွေရှိထဲကပါ.. ဒါနဲ့ သူ့ရဲ..ဓမာရုံရေစက်ချတော့ သူလူပါတယ်ပေါ့... ဘယ်သံဃာမှ ဘယ်သံဃာမှ မထားပါဘူးပေါ့.. အမှန်တော့လည်း ခေတ်အဆက်ဆက် ထားပုိုင်ခွင့်မရှိပါဘူး… အဲ့ဒီပွဲအလယ်က မြောင်းကြီးကတော့ ဒီအတုိုင်းကျန်ထား သာပေါ့လေ..
နောက်ရှိသေးတယ် စုိုင်းအောင်.. ငါတုို့ဒီဒေသကြီးကုို နုိုင်ငံခြားခရီးသွားတွေအတွက် ဆုိုပြီး.. ဂျိန်လင်း ပုိုင်ရှင် ယုဇော်ခေါင်ကနေ..ကန်ထရုိုက်စွဲလိုက်သေးတယ်.. နာမည်ပြောလည်း မကောင်းပါဘူးကွာ.. တချို့ သူကြီးနဲ့ တချို့ရွာကျောင်းထုိုင်တွေလေ.. ဟုိုက.. ဟုိုဟာလေးလာပေးလုိုက် ဒီဟာလေးလားပေးလုိုက် ကြားထဲအချို့ ဘုန်းကြီးကျောင်းကုို စောင်ဆုပ်လေးကန်တော့လုိုက် မူန့်ပုံးလေး ကန်တော့လုိုက်နဲ့ ကန်ထရုိုက်စွဲဖုို့ ခွင့်ပြုတယ်ဆုိုပြီး သဘောတူပါတယ်ဆုိုတဲ့ လက်မှတ်ထုိုးပေးလုိုက်တဲ့.. ဘုန်းကြီးနဲ့ ရွာသူကြီးတွေတောင် ရှိသေးတယ်…မင်း.. .
အေး..အဲ့ဒါ…နောက်မှ ဆယ့်တရွာကျောင်းအုပ် ဘုန်းကြီးကသိလုို့ ကဲမဖြစ်တော့ဘူးဆုိုပြီး ၁၁ ရွာကျောင်းထုိုင်တွေ တံခါးပိတ်အစည်းဝေး ကျင်းပပြီးလုပ်လုိုက်မယ်ဆုိုပြီး.. ၁၁ရွာ ဘုန်းကြီးတွေကုို ခေါ်ပြီး လုပ်လုိုက်လုို့ကောမောင်… မဟုတ်ရင် အခုဆုို ငါတုို့လယ်တွေ စုိုက်ခင်းတွေ ဘာဖြစ်ကုန်မှန်းမသိတော့ဘူး.. အဲ့ဒါပဲဆုို .. ငါ့တုို့လူမျိုးတွေက သူများဘာကုိုမြင်လုို့ ဘာလုပ်မှန်းမသိ .. မစဉ်းစားပဲ….. နောက်ဆုို လူမျိုးတမျိုးလုံးပျောက်သွားမှာမောင်.. ဟုလေးဖေက ဆုိုပါတယ်...
ဟုတ်ပါတယ်.. အင်းတော်ကြီးဒေသမှာ ကျနော်တုို့ငယ်ငယ်ထဲ ဗမာရွာဆုိုတာ.. တရွာမှမရှိပါဘူး ဗမာလူမျိုးတော့ရှိပါတယ်.. ဒီလုိုပဲ ကချင်တွေ လာနေတဲ့ တချို့ရွာ အမှီးအပုိုင်းတွေမှာလည်း ရှိပါတယ်.. အထူးသဖြင့် ကျနော်တုို့သျှမ်းတွေက လယ်လုပ်တဲ့လူမျိုးတွေ.. ကချင်တွေက တောင်ယာခုတ်တဲ့လူမျိုး မတူကြဘူးလေ.. အဲ့ဒီနားမှာက လယ်လုပ်တဲ့နေရာပဲများတယ်..
..ဒါပေမဲ့ ... အင်းအနောက်ဘက် တောင်ကုန်း တောင်တန်းတွေမှာတော့ ကချင်ရွာတွေရှိပါတယ်… ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီအင်းကြီးပတ်လည်က သျှမ်းနီရွာတွေဟာ သမုိုင်းရှိခဲ့တဲရွာတွေပါ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အုပ်စုလုိုက်နေကြတဲ့ အထဲမှာ အုပ်စုသဘောကုို အလေးမထား မတုိုင်ပင်ပဲ ကုိုယ့်နီးစပ်ရွာလေးနဲ့ လက်မှတ်ထုိုး သဘောတူခြင်းမျိုးဟာ ကုိုယ့်သမုိုင်း..မဲသလုို နောက်မျိုးဆက်အတွေ အတွက်လည်း မကောင်းပါ.. နောက်ဆုိုရင် တစ်ရွာနှင့်တရွာ.. အမြင်မကြည်လင်မှုတွေ ... မလုိုမူံးတီးမှုတွေပါ ဖြစ်လာနုိုင်ပါတယ်.. ကုိုယ့်ရွာကြားကုိုလည်း အခြားသူများ ၀င်ရောက်လာမှုကြောင့် ခုိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှုတွေပါ ဖြစ်လာနုိုင်တယ်လုို့ တွေးနေခုိုက်မှာ.. ဆုိုင်ကယ်နှစ်စီးပြိုင်မောင်းလုို့ ရွာလမ်းအတုိုင်း အသံများဆူညံစွားကြာလုိုက်ရပြီ ကျနော်တုို့ကုို လာကြိုတဲ့သူမှန်းတော့ သိလုိုရပြီ.. ကဲ လေးစိန်ဖေရေ .. .. နောက်နှစ်လောက် ပြန်လာနုိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆုိုပြီး လောင်လုံစည်းခမ်းကုို မခွဲခြင်ပဲ ခွဲခွါခဲ့ရပါပြီ….
***အနောက်ဖက်..ကျားများဆီသုို့ ခရီးသွားဧည့်သည် (အပုိုင်းတစ်)***
မန္တလေး မြစ်ကြီးနား အထူးအမြန်ရထားကြီးသည် လှုပ်လိလှုပ်လက်နဲ့ ယိမ်းထုိုးခါးရမ်းလုိုက်ပေါ့ ကျနော်တုို့လည်း နုိုးတ၀က်မနုိုးတ၀က်နဲ့ တညလုံးခုတ်မောင်းပြီး လုိုက်ပါလာရာ နံနက် ၈ နာရီခန့် အချိန်တွင် ရောက်ခဲ့လေပြီး ကချင်ပြည်နယ် မုိုးညှင်းမြို့ မြို့ ဘူတာဆီသုို့ လုံးကြွယ်နဲ့ကျနော်တုို့သည် အသိအိမ်မှာထားရှိထားတဲ့ လုံးကြွယ်ရဲ့ ဆုိုင်ကယ်ကုိုယူပြီး မုိုးညှင်းမြို့မှ ဆုိုင်ကယ်ဖြင့် အုန်းစံဆုိုင်သွားဖုို့ ထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်.. မော်တော်ကားလမ်းပေါ်မှ မီးရထားလမ်းကုို ဖြတ်ကျာ်မည်ပြုစဉ် အမှတ်မထင် ရထားသံလမ်းဘေး ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာ ပန်းခြံလေးဖြင့် ၀န်းရံထားသော မုိုးညှင်းမြို့မှ ကြိုဆုိုပါ၏ ဆုိုတဲ့ ဆုိုင်းဘုတ် ကြီးနဲ့အတူ ဆင်ဖြူရုတ်ကြီး ဦးခေါင်းပေါ်မှာ ဗျိုင်းနားနေသော ခန့်ညားထည်ဝါတဲ့ ရုပ်ထုကြီးကုိုတွေ့လုိုက်ရပေသည်။
ထုိုခန့်ညားထည်ဝါတဲ့ ရုတ်ထုကြီးကုို မြင်လုိုက်စဉ်ခဏမှာပဲ.. ငယ်စဉ်က မိဘ ဘုိုးဘွားများ အမြဲပြောခဲ့သော မုိုးကောင်း၊ မုိုးညှင်း၊ မုိုးမိတ် ရာဇာဝင်တော်ကြီး ပြေးမြင်မိတော့သည် မိုးညှင်းမြို့ ကို ရှေးယခင်က မိန်းယန်းမြို့ ဟုခေါ်ဆိုခဲ့ကြသည်။ “မိန်းယန်း(Mig Yang) သည် သျှမ်းဘာသာစကား မှ ဆင်းတက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ မိန်း (Mig) မြို့တော်၊ ယန်း (Yang)သည် ဗျိုင်းဟု အဓိပ္ပါယ်ရသဖြင့် ဗျိုင်းမြို့ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။
မိုးညှင်းမြို့တည်သော အခါ ဆင်ဦးကောင်းတွင် ဗျိုင်းလာနားသည် ကိုအကြာင်းပြု၍ “မိန်းယန်းမြို့” ဗျိုင်းမြို့ ဟုခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ (မိုးကောင်း၊ မိုးညှင်း၊ မုိုးမိတ် သျှမ်းမင်းသား ညီနောင် သုံးဦးရာဇာဝင်) ယင်းသည် ပထမ မိုးညှင်းမြို့ (မိန်းယန်း) ဟုခေါ်သည်။ ရှေးခေတ် ဝေါဟာရအားဖြင့် ကျိုင်းဟုန်ဟု ခေါ်သော မုိုးမိတ်မြို့ကုို ဗုဒ္ဓသာသနာ သက္ကရာဇ် မတိုင်မီ ၁၄၈ (ခရစ်သက္ကရာဇ် မတုိုင်မီ ၉၉၂ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့ကြောင်း မြန်မာနုိုင်ငံ သမုိုင်းအဖွဲ့ ဒုတိယ ဥက္ကဌ (၂) နုိုင်ငံခြားဘာသာ သိပ္ပံကောလိပ် ကျောင်းအုပ်ဟောင်း ဆရာကြီး ဒေါက်တာ စုိုင်းအောင်ထွန်း ရေးသားပြုစုသော တုိုင်းလူမျိုးစုများ ပြန့်နှံနေထုိုင်ပုံ သမုိုင်းစာတမ်းတွင် လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။
မဇ္ဈိမဒေသ၊ ရာဇဂြိုလ်ပြည့်ရှင် နာဂဒါမင်းသား၏ သားတော် ဥပတိသမင်းသား သည် ကောက်ကွေ့ချောင်း ပေါက်ဝ ၌ ကျခတ်မြို့ ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် မောသျှမ်း (၂၉) ခရိုင်ကို ရန်သူတို့ တိုက်ခိုက်လေသည်။ ထိုနယ်မှ မောသျှမ်းတို့သည် ဧရာဝတီမြစ် ကိုကူး၍ ဥပတိသထံ ခိုလုံလာကြသည်။ ဤသည်ကို အကြောင်းပြု၍ ရှေးသူဟောင်း တို့သည် မိုးညှင်းအစ ကျခတ်က ဟုဆိုစမှတ်ပြုကြသည်။ မိန်းယန်းမြို့ ကို အေဒီ (၁၁) ရာစုနောက်ပိုင်းမှ ဒုတိယ မိုးညှင်းကို ပြန်လည် တည်ထောင်ခဲ့သည်ဟု သမုိုင်းရာဇာဝင် တခုဖြစ်တည်ရှိခဲ့လေသည်။
ဒီလုိုနဲ့ကျနော်တုို့ စီးလာသော ဆုိုင်ကယ်လေးသည် ဘီးလူးမြို့လေးကုို ဖြတ်ကျော်ကာ ကျနော်အား မန်းလေးမှလာကြိုတဲ့ လုံးအောင်ကြွယ်အိမ်ရှိရာ အုန်းစံဆုိုင်ရွာလေးတုို့ ရောက်ရှိလာပါတော့တယ်… ဒီလုို့နဲ့ ရေမုိုးချိုးကာ ထမင်းစားပြီး ခဏမှာပဲ ခရီးပန်းလာ၍ထင်သည် တညလုံးတခေါ်ခေါ်အိပ်မောကျပြီး မနက်မုိုးလင်းလုို့ မုိုးလေးတဖွဲဖွဲကျနေတဲ့ အသံနှင့်အတူ အုန်းစံဆုိုင်ရွာသားတုို့ ဘီးလူမြို့ဈေးသွားသူသွား မုိုးညှင်းမြို့ဈေး သွားသူသွား သွားလာနေကြသည်။
များမကြာမှီ အိမ်ရှင်များလည်း ဈေးဆုိုင်ခင်းသူခင်း ချက်ပြုပ်သူချက်ပြုပ် ကျောင်းသွားသူသွားပေါ့ အိမ်ရှေ့ ကားလမ်းတဖက်ကျော်မှ အုန်းစံဆုိုင်ရွာရဲ့ .. မှုလတန်းကျောင်းလေးရှိပါတယ်... ထုိုကျောင်းလေးရဲ့ ကျောင်းတက် ခေါင်းလောင်းသံနဲ့အတူ ကျောင်းသားများ နုိုင်ငံတော်အလံအလေးပြုသံ သစ္စာဓိဌာန် ဆုိုအသံများကုို ကျောင်းနှင့်မျက်နှာချင်းဆုိုင် မုို့ကျနော်တုို့ အတုိုင်းသားကြားနေရလေသည်။
နံနက်ထဲက ဖွဲဖွဲနဲ့ ကျနေတေဲ့ မုိုးလေးများ ရပ်သွားသည်နှင့်အညီ ကျောင်းသားများစာအံသံ များလည်းကြာနေရလေသေည် ကျနော်နှင့်လုံးအောင်ကြွယ် ရေနွေးကြမ်းထုိုင်သောက်နေစဉ် အသက်သုံးလေးနှစ်ခန့် ချစ်စရာ့ရွယ် သျှမ်းမျက်နှာပေါက်နဲ့ ကလေးငယ်လေးသည် လာနေကြမုို့ထင်ပါရဲ့ လုံးကြွယ်၏ဇနီးအား အပြုံလေးနဲ့နှုတ်ဆက်ဟန်ဖြင့် ဆုိုင်ထဲတုို့ဝင်လာလေသည်။ ဒီကလေးက ကျောင်းဖွင့်ရင် ဒီလုိုပဲမောင် သူ့အကုိုတွေ သူ့အမတွေကျောင်းသွားတော့ ဒီမှာလာနေကြပေါ့ ဟုလုံးအောင်ကြွယ်က ဆုိုပါတယ်…
အေးဒါနဲ့ ..နင့်ကုိုငါပြောပြဦးမယ် ဒီကလေးမိသားစုနဲ့ ပတ်သက်လုို့ ငါတုို့သျှမ်းတွေရဲ့ အားနည်းချက်က သူအမေက ငါတုို့ဒီရွာက သျှမ်းနီမပဲမောင်.. သူ့အဖေကတော့ ရွှေဘုိုဘက်က ဒီမှာအလုပ် လာလုပ်ရင်း ညားကြတာမောင်..
ဒီလုိုနဲ့ ဒီကလေးနဲ့ သူ့..အကုိုတွေအမတွေကုို ငါတုို့ရွာက ကလေးတွေက ဗမာကလေး.. ဗမာကလေး.. လုို့ပဲခေါ်ကြတယ်မောင်.. ဒါပေမဲ့သူအဖေလည်း ဘာမှမပြောပါဘူး… သူကုိုယ်တုိုင်းလည်း ဗမာဆုိုတော့ ဒီကောင်းလေးကုိုမွေးလုို့ ..သုံးရောက်မြောက်ရှိလာလုို့ မနှစ်ကပဲ ရွှေဘုိုက သူ့အဖုိုးအဖွားတွေစီကုို သွားလည်ကြတယ်လေ….
အေး..ငါတုို့ကလည်းဒီမှာ သျှမ်းနီပါတီအရေး လုပ်နေတာကုိုးကွ.. သူတုို့ပြန်လာတော့..
ငါတုို့ရွာမှာ သျှမ်းနီပါတီဆုိုင်းဘုတ်တွေတောင် တင်ပြီးကုန်ပြီမောင်.. အဲ့ဒီတော့… ငါတုို့ကလည်း မှတ်ပုံတင်ကိစ္စတွေဘာတွေ ပြောကြဆုိုကြပေါ့… ဒါနဲ့ ဒီကလေးအဖေက ကြားသွားပုံရတယ်မောင်.. တနေ့မှာတော့ သူက ငါ့ဆီကုိုလာပြီ.. ငါကုို .. မျက်ရည်ဝဲ၀ဲနဲ့ပြောရှာတယ်ကွာ.. ကျနော်..ဒီရွာမှာနေတဲ့အခါ… ကျနော့်ကုိုခင်ဗျာတုို့…ဗမာ.. ဗမာလုို့ခေါ်ကြတယ် ကျနော်စိတ်မဆုိုးပါဘူး ကျနော့် ..သားသမီးတွေကုိုလည်း ကလေးတွေက ဗမာကလေး.. ဗမာကလေးလုို့ပဲခေါ်တယ် ဒါလည်းကျနော် စိတ်မဆုိုးပါဘူး … ဒါမဲ့.. ကျနော်တုို့...ရွာကုိုပြန်ရောက်သွားတော့… ကျနော်တုို့ရွာက သူ့မေကုိုလည်း တရွာလုံးက မသျှမ်းမသျှမ်းမလုို့ ခေါ်ကြတယ်… ကျနော့်သားတွေကုိုရော ဖုိုးသျှမ်းကြီး သျှမ်းမလေး ဖုိုးသျှမ်းလေး လုို့ပဲခေါ်ကြတယ်..
ကျနော်တုို့..ဒီရွာပြန်ရောက်တော့… ဒီရွာက.. ဗမာကလေးဗမာလေးလုို့ ခေါ်ကြပြန်တယ် ကျနော်စိတ်မဆုိုးပါဘူး… ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတုို့ အခု သျှမ်းအရေးလုပ်နေကြပြီလေ.. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျနော့် ..မိန်းမဟာလည်းဒီရွာက သျှမ်းနီမပဲလေ… ကျနော့်..သားတွေဟာလည်း ဒီရွာမှာမွေး .. ဒီရွာမှာကြီးတယ်… ကျနော်..တယောက်ကလွဲရင် ကျန်တဲ့တအိမ်လုံး .. ဒီရွာက.. ရွာသားပါပဲ. ..သူတုို့အသွေး သူတုို့အသားတွေကပါ… ဒီမှာမွေး.. ဒီရေသောက် ..ဒီဆန်စားပြီး ကြီးလာတဲ့... ဒီကလေးအတွက်တော့ … ကျနော့်ကလေးတွေကုို.. သျှမ်းဖြစ်ခွင့်တောင်းခြင်းတယ်ဗျာ.... ကျနော်မဖြစ်ချင်နေပါ ကျနော်ကလေးတွေအတွက်လုို့.. ဖခင်တဦးက… ၀မ်းနည်းကြေကွဲစွာ ပြောလာတယ်ကွာလုို့ လုံးအောင်ကြွယ်ပြောပါတယ်…
ကျနော်လည်း..စိတ်မကောင်းချင်းများစွာနဲ့ စာနာမိပါတယ် ဖခင်တယောက်ရဲ့ တောင်းပန်သံဟာ သားသမီးတွေအတွက် နောင်ရေး ဘယ်လောက်အရေးကြီး တယ်ဆုိုတာကုို တွေးရင်.. ကျနော်တုို့သျှမ်းတွေရဲ့ အဓိကအားနည်းချက်ကြီး လုို့ပဲဆုိုရမလား.. ဒီလုိုအဖြစ်မျိုးဟာ သျှမ်းတွေရှိတဲ့ ရွာတုိုင်းလုိုလုို ကြုံနေရမယ်ဆုိုတာလည်း နားလည်းလုိုက်ပါတယ်.. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလုိုအဖြစ်မျိုးနဲ့ ကြုံခဲ့ရင် ပြစ်ပယ်ချင်းထက် လက်တွဲကူညီဖေးမပေးခြင်းမျိုး လုပ်သင့်ပါတယ်.. ဒီလုိုမျိုးတွေ ၀ုိုင်းပြီးပစ်ပယ်ကြလုို့ သျှမ်းလူမျိုးတွေ လျှော့နဲလာခြင်းလည်း ရှိနေတာပဲလုို့... ကုိုယ့်တယောက်ထဲတွေးနေရင်း.. တနယ်တကျေးကုိုများ သျှောင်နောက်ဆံထုံးပါ လုိုက်သွားရရှာတဲ့ သျှမ်းတွေများ ... ဆုိုရင်တော့လုို့.. တွေးနေချိန်လေးမှာပဲ လုံးကြွယ်သမီးငယ်ရဲ့ ဆုိုင်ကယ်စက်သံကြားလုိုက်လုို့ အတွးစများ ပျက်ပြယ်ကာ... ကျနော်တုို့ နှစ်ယောက်သား ရှေ့ခရီးဆက်ဖုို့ သူအိပ်ငါ့အိပ်ကုိုစွဲကာ ကားကိတ်ဆီသုို့ ထွက်ခွါလာခဲ့ရပါပြီ…
ဆက်လက်၍ အပုိုင်း သုံးသုို့ အားပေးကြပါရန်